I-Tesla izakuvula ivenkile yayo yokuqala eSpain e-Barcelona | Iindaba zeGajethi
Imarike yemoto yombane iyaqhubeka nokukhula ngesantya esiphezulu, ikakhulu ngenxa yezindululo ezinomdla ngakumbi tesla, Ngaphandle kwamathandabuzo enye yeenkampani ezihamba phambili. Kudala sazi iinjongo zenkampani esekwe yaza yayalelwa ngu-Elon Musk ukuqala ukuvula iivenkile, okanye abathengisi kwihlabathi liphela.
Phakathi kwezicwangciso yayikukuvula iivenkile ezininzi eSpain, emva kokuba ezo zingxamisekileyo sele zivulekile kokubini kwilizwe lethu nasePortugal. Kwaye ngoku Sele sinesiqinisekiso esisemthethweni sokuba indawo yokuqala kaTesla ezinzileyo kunye neSpain iya kuvula iingcango zayo kungekudala e-Barcelona.
Ukongeza, kuye kwabhengezwa ukuba emva kokuvulwa kwale venkile, siza kuba nenye eneempawu ezifanayo kwisixeko saseMadrid, ngokunokwenzeka eCalle Serrano 3, nangona kungekho ngqinisiso lusemthethweni lwamva.
Ivenkile yeTesla e-Barcelona siyazi ukuba izakubekwa eCalle Rosselló 257, kufutshane kakhulu nePasseig de Gràcia kunye neLas Ramblas, amanyathelo ambalwa ukusuka kwi-Diagonal metro. Umhla wokuvula usengumbuzo omkhulu, kodwa yonke into ibonisa ukuba asizukulinda ixesha elide ukubona, ukuvavanya kwaye ngubani owaziyo ukuba singazithenga na iimodeli ezahlukeneyo zeemoto ezibonelelwa nguTesla ngoku.
Ngaba ucinga ukuba uTesla uya kuphumelela ngokuvulwa kwesitolo esitsha kwilizwe lethu?. Sitshele kwisithuba esibekelwe ukuphawula kule post okanye ngayo nayiphi na inethiwekhi yoluntu apho sikhona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » I-Tesla iya kuvula ivenkile yayo yokuqala eSpain e-Barcelona
Amava emidlalo yeXbox One X aya kuba kufutshane kakhulu nePC